अहिले म नवलपरासीस्थित अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्रस“ग सम्बद्ध छु । सी.बी.आर. नेटवर्क अपाङ्गता समन्वय समिति नवलपरासीको कोषाध्यक्ष, पश्चिमाञ्चल महिला सङ्घको संयोजक र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य छु.	Detail
मिसन फिप्टी—फिप्टीविष्णु शेरचनविकल्पजोमसोम, मुस्ताङ संसार परिवर्तन गर्नका लागि आफैँबाट परिवर्तनको सुरुआत गर्नुपर्छ भनेको सुनेकी थिएँ । वाप्ड्कामा संलग्न भएपछि मलाई लाग्न थालेको छ, हो संसार परिवर्तन गर्नका लागि आफैँबाट सुरुआत गर्नु्पर्छ । “मिसन ५०÷५०” आधा जनसङ्ख्या महिला भएको हाम्रो मुलुकमा महिल	Detail